Ị nọ ebe a: Home / blog
Ego Forex na Akaụntụ Jikwaa bụ Akaụntụ Nhọrọ Ndị Ọzọ.
July 13, 2021 by iwuchukwu
Ego Forex na akaụntụ ejiri jikwaa ego ndị ọzọ a ma ama. A na-akọwapụta okwu a bụ "Investments ọzọ" dị ka azụmaahịa nchekwa azụmaahịa na mpụga itinye ego ọdịnala dịka ebuka, agbụ, ego, ma ọ bụ ezigbo ala. Ulo oru ntinye ego ndi ozo gunyere:
Ego nke oke ego.
Ego ga-eme n'ọdịnihu.
Ọzọ klas ndị na-abụghị ọdịnala.
A maara ndị njikwa ego maka ikike ha nwere iji wepụta nkwụghachi zuru oke, n'agbanyeghị ọnọdụ ahịa. N'iji usoro ntinye ego na usoro nyocha na-akwado nyocha, ndị njikwa ndị ọzọ na-anwa ịnye ntọala bara uru na uru dịka obere ihe egwu site na obere volatility na ihe puru omume nke imeziwanye oru. Dịka ọmụmaatụ, ego ego na njikwa ndị njikwa akaụntụ na-azụ ahịa zuru oke n'agbanyeghị ahịa ahịa ọdịnala, dị ka ahịa ahịa, na-arụ.
A gaghị eme ihe ngosi nke njikwa ego Forex na nke ọ bụla n'ime klas akụ na ụba edepụtara n'elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ahịa ahịa ngwaahịa US dị ala, ọtụtụ Ọrụ onye na-enye ndụmọdụ maka nhatanha US ga-agbadata. Agbanyeghị, ntuziaka nke ahịa ahịa US agaghị emetụta arụmọrụ nke njikwa ego Forex. N'ihi ya, ịgbakwunye ego ego ma ọ bụ akaụntụ ejiri jikwaa na pọtụfoliyo nke itinye ego ọdịnala, dịka nha anya, ebuka, agbụ, ma ọ bụ ego, bụ ụzọ magburu onwe ya iji gbasaa pọtụfoliyo ma nwee ike belata profaịlụ ya na ihe ọghọm ya.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ego Forex, Akaụntụ Akaụntụ Forex
Ihe Mgbapụta Maka Akaụntụ Ego Forex.
Nwere ike 25, 2021 by nchịkọta akụkọ
Jiri nlezianya gụọ akwụkwọ ngosi gị iji ghọta iwu mgbapụta.
Ihe ndekọ ego ejiri na Forex na-enweta ego mgbapụta, dịka ọnwa, ọnwa atọ, na kwa afọ. Ha nwekwara ike ịchọ oge ngosipụta, dịka 60, 90, ma ọ bụ 180-ụbọchị. Na mgbakwunye, ụfọdụ Forex jikwaa akaụntụ mmemme na oke ego nwere ike ịkwụsị mgbapụta ozugbo ha gafere pasent ụfọdụ nke akụ niile dị n'okpuru njikwa na mmemme ahụ. Imirikiti ihe ndekọ ego njikwa Forex na oke ego ngosi akwụkwọ nwere asụsụ na-egosi na njikwa ahia nwere ike kwụsịtụ ndọrọ ego ma ọ bụrụ na ndị mgbapụta etinye ndị fọdụrụ investors na ikenenke ọnọdụ. Trading oru mgbe "igbachi" ego ọ'sụ na isi obodo ruo oge ụfọdụ n'elu mbụ ulo oru mbo. Oge mkpọchi ndị a nwere ike ịbụ "ihe siri ike," nke pụtara na onye na - etinye ego enweghị ike iwepụta ego ya ọ bụla, ma ọ bụ "dị nro," nke pụtara na onye nwere ego nwere ike were pasent nke ngụkọta akụ ya niile n'okpuru njikwa ego ma ọ bụ mmemme akaụntụ jisiri ike.
Ihe mgbapụta bụ akụkụ dị mkpa nke usoro akaụntụ njikwa Forex. Ọ dị mkpa ka ọorụ na-agụ Forex ego ma ọ bụ jisiri akaụntụ omume ngosi akwụkwọ ya mere ọ bụghị anya mgbe ọ na-agbali ịdọrọ ya ego si trading akaụntụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Akwụkwọ ngosi, Nwepu Akaụntụ Forex, Ego Forex, Akaụntụ Akaụntụ Forex Tagged With: ihe mgbapụta
Forex Akwụkwọ Akaụntụ Ngosipụta Akaụntụ
September 22, 2018 by iwuchukwu Ahapụ a Comment
Ihe ngosi ngosi nke usoro ihe omume Forex jikwaa na-enye ndị nwere ike itinye ego ihe dị mkpa gbasara mmemme ahụ ma ndị ọchụnta ego kwesịrị ịgụ ya nke ọma. Ihe odide ahụ yiri nke nnukwu ihe mgbochi ego nke onwe ya, ma e wezụga na isi mesiri ike bụ igosipụta eziokwu na ọ bụghị na Nsonaazụ ahịa Forex na-azụ ahịa nsonaazụ. Enwere ike ịtụle akwụkwọ ngosi a dị ka atụmatụ azụmahịa dị mkpụmkpụ. Akwụkwọ ahụ gụnyere mkparịta ụka banyere usoro azụmaahịa ejiri ya
Akwụkwọ ngosi ga-abụ akụkụ nke usoro mmeghe akaụntụ Forex.
jikwaa akaụntụ mmemme. Ọ na-atụlekwa ozi ndị bụ isi dịka okewa ahia na ihe ize ndụ dị na atụmatụ Forex trading. Ihe ngosi nke usoro ihe omume mmemme nke Forex ga-ebu ozi gbasara onye njikwa ahia mmemme, gụnyere nzụlite ya na iru eru ya, yana ozi gbasara ego nwere ike ire. Akwụkwọ ngosi ahụ nwere ozi dị mkpa nke onye na-etinye ego na Forex kwesịrị ịtụle. Ihe ngosipụta ihe omume usoro ihe omume Forex a na-ejikwa n'aka onye itinye ego ga-abanye aka dị ka akụkụ nke usoro mmeghe akaụntụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Akwụkwọ ngosi, Akaụntụ Akaụntụ Forex, Investment Tagged With: usoro mmeghe akaụntụ, ngosi, akwụkwọ, Akaụntụ Forex jikwaa, mepee akaụntụ Forex
Nsogbu Na Forex Track Records
August 6, 2018 by iwuchukwu Ahapụ a Comment
Nsogbu dị na ndekọ ndekọ Forex bụ na ha na-ama aka inyocha. Otu ụzọ dị mfe iji kwado usoro ndekọ egwu bụ site na ịnye ya "ọgụgụ isi" nyocha. Jụọ onwe gị ajụjụ abụọ a dị mfe:
1. Ihe ndekọ ndekọ Forex ọ na-agbakwụnye na ndekọ ndekọ egwu nke ego ndị ọzọ edebere nke ọma?
2. Ihe ndekọ ahụ ọ na-agbanwe oge ọ bụla karịa mmemme ndị ọzọ nke a na-enyocha ma nyochaa ndekọ ha?
Ọ bụrụ na onye njikwa nke ego Forex ma ọ bụ njikwa akaụntụ njikwa na-ekwu "ihe omume m dị elu + + 20% kwa ọnwa maka ọnwa 12 ikpeazụ!"; ị nwere ike ịbụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% ijide n'aka na onye njikwa ahụ na-agha ụgha, ma ọ bụ na ọ nwere naanị narị ole na ole dollar n'okpuru njikwa, ma ọ bụ na ọ bụ ọrụ azụmaahịa na-adịghị mkpa dollar dollar nke ọha na eze.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Akaụntụ Akaụntụ Forex, Dekọọ ndekọ Tagged With: nyochaa
Ogologo Ogologo na Egwu Emezigharị Ọrụ
Nkọwa Sharpe bụ usoro arụmọrụ gbanwere n'ihe ize ndụ nke na-egosi ọkwa nloghachi ngafe kwa otu ihe ọghọm na nkwụghachi ego Forex. Na ịgbakọ usoro Sharpe, nloghachi ngafe bụ nloghachi na karịa oge dị mkpirikpi, ọnụọgụ na-enweghị ihe ọghọm, na ọnụ ọgụgụ a kewara site n'ihe ize ndụ, nke ndị na-anọchite anya ya kwa afọ volatility ma ọ bụ ọkọlọtọ ndiiche.
Nkọwa Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Na nchikota, nke Sharpe Ratio bu otu onu ogugu onu ogugu nke nloghachi na nloghachi nloghachi na onodu a na etinyeghi ego. Ọdịdị dị elu nke Sharpe dị elu, nke ka njọ na-agbanwe nloghachi. Ọ bụrụ Afọ nke Treasury agbụ na-amịpụta 2%, na mmemme njikwa akaụntụ Forex jikwaa nwere otu arụmọrụ na njedebe nke ọnwa ọ bụla, usoro ihe omume Forex jikwaa ya na obere ọnwa P&L volatility ga-enwe ọkwa dị elu.
Nkọwa bụ Sharpe bụ ihe dị mkpa maka njikwa ihe ize ndụ maka ndị investors ịghọta.
A na-ejikarị Sharpe Ratio mee ihe iji tụọ arụmọrụ gara aga; agbanyeghị, enwere ike iji ya iji tụọ nkwụghachi ego ego n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na atụghachi azụ na ọnụọgụ ọnweghị ụgwọ dị na ya.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ego Forex, Dekọọ ndekọ Tagged With: nha, ruru ruru
Na Nleba Anya: Ndekọ Akaụntụ Akaụntụ Ejiri Aka Forex
N'oge na-adịghị anya, otu onye ahịa gwara m ka m nyochaa ndekọ egwu ya, mana m nwere naanị 5-nkeji iji mee nyocha ahụ. Enwere ike inyocha ihe ndekọ egwu n'ime nkeji ise? Azịza ya bụ: ee. Ọ ga - ewe naanị minit ole na ole iji nyochaa nke ọma edekọ ndekọ ndekọ Forex *.
O bu ihe nwute, otutu akwukwo a haziri nke oma ma sie ike ichikota ozi obula n’agbanyeghi oge onye nyocha gha agha ighota onu ahia ahia. Usoro ndekọ egwu a haziri nke ọma ga-agwa onye nyocha ahụ ihe ndị a (edeghị ya na usoro nke mkpa):
Aha onye ahịa Forex, ọnọdụ na aha mmemme ahụ.
Broka aha na ebe.
Ọnụ ọgụgụ nke akụ ndị dị n'okpuru njikwa.
Ọnụ kasị elu nke ihe ndozi.
Ogologo usoro ahia.
Onwa site na nloghachi nke ọnwa na AUM.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Akaụntụ Akaụntụ Forex, Dekọọ ndekọ Tagged With: ọnụ ọgụgụ